က​ဏ္ဍ​ - ယေဘုယျရှာဖွေတွေ့ရှိချက်များ | Invest Myanmar Summit 2019
A Private Sector Perspective – Attracting Foreign Investments to Myanmar
ယေဘုယျရှာဖွေတွေ့ရှိချက်များ / By unicode
Myanmar’s recent transition out of five decades of economic and political isolation provides an opportunity for the country to secure much needed investment to build basic infrastructure for its citizens and facilitate growth in its fast-growing sectors. Such projects will require massive amounts of capital and specialised expertise, and Foreign Direct Investment (FDI) will be …
A Private Sector Perspective – Attracting Foreign Investments to MyanmarRead More »
A Conversation with H.E. U Thaung Tun, Union Minister of MIFER, and Chairman of MIC
In its efforts to draw investments into the country, the Myanmar Government recently establishedanew Ministry of Investment and Foreign Economic Relations, paving the way for better coordination between ministries on local and foreign investment as well as on development projects implemented with foreign aid and loans. H.E. U Thaung Tun, Union Minister for …
A Conversation with H.E. U Thaung Tun, Union Minister of MIFER, and Chairman of MICRead More »
Myanmar 2.0 – Private Sector, the Engine of Economic Growth and Job Creation by U Min Ye Paing Hein, member of NECC
In August 2018, the Ministry of Planning and Finance published the Myanmar Sustainable Development Plan (2018-2030). The government’s master plan for the development of the country providesaframework for coordination and cooperation across all ministries, states and regions. In short, the MSDP recognises the role of the private sector as the primary engine of …
Myanmar 2.0 – Private Sector, the Engine of Economic Growth and Job Creation by U Min Ye Paing Hein, member of NECCRead More »
National League for Democracy အစိုးရသည် ရုံးစထိုင်သည့် ၂၀၁၆ ဧပြီလမှစ၍ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအတွက် မြန်မာနိုင်ငံတွင် စီးပွားရေးလုပ်ကိုင်ရ လွယ်ကူစေရန်ရည်သန်လျက် အရေးကြီးသော ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများကို အတော်များများလုပ်ကိုင်လာခဲ့ပါသည်။ ၎င်းတို့ကို အချိန်ဇယားအလိုက် အတိုအကျဉ်းမျှ ဖော်ပြလိုက်ပါသည်။ ၂၀၁၆ ဝန်ကြီးဌာနအရေအတွက်ကို ၃၆ မှ ၂၁ အထိ လျော့ချလိုက်ရာ ဝန်ကြီးအရေအတွက်မှာ ၇၅ ရာခိုင်နှုန်းလျော့ကျသွားသည်။ ဘတ်ဂျက်လိုငွေလျှော့ချရန်အတွက် အစိုးရအသုံးစရိတ်ကို လျှော့ချခြင်းဖြစ်သည်။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ အတည်ပြုလက်ခံရေး လုပ်ငန်းစဉ်ကို ဗဟိုမှ ချုပ်ကိုင်မှုလျော့ချပြီး ပြည်နယ်နှင့် တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရများအား ပိုမိုလုပ်ကိုင်ခွင့် အာဏာပေးရန် အစိုးရက စိတ်ပိုင်းဖြတ်ထားသည်။ မိုဘိုင်းကွန်ယက်လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူများနှင့် ဘဏ်မဟုတ်သော ငွေကြေးအဖွဲ့အစည်းများကို ငွေကြေးဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်နိုင်ရန် ကာလကြာစွာ စောင့်စားနေခဲ့ရသော စည်းမျဉ်းဥပဒေများကို မြန်မာနိုင်ငံဗဟိုဘဏ်က ထုတ်ပြန်ပေးခဲ့သည်။ ပြည်တွင်းဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများအတွက် …
အဓိကစီးပွားရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှု အချိန်ဇယားRead More »
ရာဘာလုပ်ငန်းအလားအလာ ဖော်ထုတ်ရေး မွန်ပြည်နယ် စိတ်အားထက်သန်
အဆင့်မြင့်ရာဘာထုတ်လုပ်နိုင်ရေးအတွက် နောက်ထက်စက်ရုံများတည်ဆောက်ရန် မွန်ပြည်နယ် အစိုးရနှင့် ပုဂ္ဂလိက ကဏ္ဍတို့က ဘဏ္ဍာရေးအထောက်အပံ့ရရှိရန် ကြိုးစားလျက်ရှိသည်။ နိုဝင်ဘာ ၂၀ ရက်နေ့က မွန်ပြည်နယ် ချောင်းဆုံးမြို့နယ် ဘိုနက်ကျေးရွာရှိ ဦးဝင်းတင်၏ ရာဘာစက်ရုံသို့ ကျနော်တို့ သွားရောက်စဉ် မီးပျက်နေမှုကြောင့် ထုတ်လုပ်မှု ရပ်ဆိုင်းထားသည်။ “ ဒီနှစ်တော့ မီးပျက်တာ ပိုနည်းပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အနည်းဆုံးတစ်နေ့ တစ်ကြိမ်တော့ ပျက်ပါသေးတယ်” ဟု ဦးဝင်းတင်က ပြောသည်။ ဦးဝင်းတင်သည် ပြည်နယ်မြို့တော် မော်လမြိုင်နှင့် မျက်နှာချင်းဆိုင် ဘီလင်းကျွန်းကို နေရာယူထားသည့် မြို့နယ်ရှိ ရာဘာစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်သူများအသင်း၏ ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သည်။ ဦးဝင်းတင်သည် လွန်ခဲ့သည့် စက်ရုံငယ် တည်ဆောက်ရန် ကျပ်သန်း ၂၀၀ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခဲ့သည်။ သူက အရည်အသွေးနိမ့် ရာဘာထက် တစ်ပေါင်လျင် ကျပ် ၃၀၀ ထိဈေးပိုရသည့် …
ရာဘာလုပ်ငန်းအလားအလာ ဖော်ထုတ်ရေး မွန်ပြည်နယ် စိတ်အားထက်သန်Read More »
Invest Myanmar Summit 2019 ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ ခံစားချက်နှင့် အခွင့်အလမ်းများ
2019 Myanmar Investment Summit ၏ အဓိကထူးခြားချက်တစ်ခုမှာ ပြည်နယ်နှင့်တိုင်းဒေသကြီးများက တိုက်ရိုက်ပါ၀င်လာကြခြင်းဖြစ်သည်။ ယခု Summit တွင် ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး (၁၀) ခုထက်မနည်းပါ၀င်ကြမည်ဖြစ်ရာ ၎င်းတို့၏ဒေသများသို့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများကို ဆွဲဆောင်နိုင်ရန် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမည့်သူများနှင့် တက်ကြွစွာ တွေ့ဆုံခွင့်ရကြ မည်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ အကြံပေးအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်သော Sandanila Investments မှ ‘သီရိသန့်မွန်’ သည် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကို မည်သို့ဆွဲဆောင်ရမည်ဆိုသည်ကို အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲများ၏ ပထမဆုံးအဖြစ် နိုဝင်ဘာလလယ်တွင် လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ “ပါ၀င်ဆွေးနွေးသူတွေကြားမှာ အတော်ထဲထဲဝင်ဝင်ဆွေးနွေးပြောဆိုခွင့် ရခဲ့ကြပါတယ်၊ တိုင်းနဲ့ ပြည်နယ်က ဒေသခံအစိုးရတွေ၊ ဒေသခံ MIC နဲ့ DICA ကိုယ်စားလှယ်တွေ၊ ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍ စီးပွားရေးလုပ်ကိုင်နေသူတွေ ပါ၀င်ခဲ့ကြပါတယ်၊ လူတိုင်းဟာ သူတို့ဒေသနဲ့ တိုင်းပြည်အတွက် ထက်ထက်သန်သန်ဖြစ်နေကြတာ အားတက်စရာအကောင်းဆုံးပါ၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေကို ဆွဲဆောင်နိုင်ဖို့ …
Invest Myanmar Summit 2019 ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ ခံစားချက်နှင့် အခွင့်အလမ်းများRead More »
ရှင်းလင်းချက် – မြန်မာနိုင်ငံ၏ ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲပြီး ဟန်ချက်ညီသော ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုစီမံကိန်း
စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနက မြန်မာနိုင်ငံ၏ ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲပြီး ဟန်ချက်ညီသော ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုစီမံကိန်း – MSDP (၂၀၁၈-၂၀၃၀) ကို သြဂုတ်လ အတွင်းက ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါသည်။ နိုင်ငံဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ၏ ပင်မစီမံချက်သည် ဝန်ကြီးဌာနအားလုံး၊ ပြည်နယ်နှင့် တိုင်းဒေသကြီးအားလုံး ညှိနှိုင်း၍ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးမူဘောင်ကို ချပေးပါသည်။ လောလောဆယ်တွင်လက်ရှိနှင့် နောင်ဆောင်ရွက်မည့် မူကြမ်းများကို စုစည်းထားသော စာမျက်နှာ (၆၆) မျက်နှာပါ အဆိုပါ စီမံချက်တွင် မဏ္ဍိုင် (၃) ခု၊ ရည်မှန်းချက် (၅) ခု၊ မဟာဗျူဟာ (၂၈) ခုနှင့် လက်တွေ့ ဆောင်ရွက်လုပ်ကိုင်ရေး အစီအစဉ် (၂၅၁) ခု ပါဝင်သည်။ နောင်လာမည့်လများ နှစ်များအတွင်း ဝန်ကြီးဌာနများ၊ ပြည်နယ်နှင့်တိုင်းဒေသကြီးများမှ အဆိုပြုတင်ပြချက်များကို MSDP နှင့် မဟာဗျူဟာအရ ကိုက်ညီမှုအပေါ်အခြေခံ၍ …
ရှင်းလင်းချက် – မြန်မာနိုင်ငံ၏ ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲပြီး ဟန်ချက်ညီသော ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုစီမံကိန်းRead More »
Private Investments Worth $54M for Chin State
Investors could channel up to US$4.9 billion into Rakhine this year
Keynote Speech by H.E. Daw Aung San Suu Kyi, State Counsellor at the Rakhine State Investment Fair
Keynote Address by H.E. U Thaung Tun, Union Minister for Investment and Foreign Economic Relations at the Rakhine State Investment Fair
“ No return on investment was ever made by staying on the sidelines” : First Rakhine Investment Fair successfully launched.
ေဒေသ – ရှမ်းပြည်နယ်
Copyright © 2020 Invest Myanmar Summit 2019 | Powered by Astra